नाकामै खोप- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १९, २०७८ मनोज बडू, अर्जुन शाह, भवानी भट्ट
दार्चुला/धनगढी/कञ्चनपुर — दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ को खतरा बढ्न नदिन भारतसँग जोडिएका नाकामा जाँचलाई कडाइ पारिएको छ । बाक्लो संख्यामा ओहोरदोहोर भइरहने सुदूरपश्चिमका मुख्य सीमा नाकामा सतर्कता अपनाउनुका साथै नेपाल भित्रिनेलाई खोप लगाउन थालिएको छ ।
दार्चुला सदरमुकामस्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुलमा भारतबाट भित्रिनेलाई बिहीबारदेखि नै कोरोनाविरुद्ध खोप दिन थालिएको हो । पुलघाटस्थित नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमार्फत १८ वर्षमाथिका सबैलाई भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । शनिबारसम्म ७४ जनालाई खोप लगाइएको जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतबाट प्रवेश गर्ने सबैलाई कोभिड खोपको दोस्रो डोज लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
कैलालीको भारतीय सीमा गौरीफन्टा नाकामा पनि हेल्थ डेस्कमा खोप लगाउन थालिएको छ । ‘केही दिनयता भारतबाट फर्किनेको संख्या बढेको छ,’ हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेशबहादुर साउदले भने, ‘खोप नलगाएकालाई अहिले भेरोसिल दिइरहेका छौं ।’ नाकामा एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण देखिएकालाई घर जान नदिएर आइसोलेसनमा राख्ने गरेको उनले बताए । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा पनि जाँचमा कडाइ गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार भारतबाट फर्किने सबै नेपालीको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । संक्रमण देखिएकालाई अस्पताल भर्ना गरेर नमुना संकलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताए ।
केन्द्रबाट मातहतका निकायमा कुनै निर्देशन नआए पनि स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले नाकामा कडाइलाई तीव्रता दिएका छन् । ‘केन्द्रबाट निर्देशन आएको छैन,’ कञ्चनपुरका सहायक प्रजिअ अशोक भण्डारीले भने, ‘नेपालीको हकमा सबैको परीक्षण गरेर भित्रिन दिएका छौं, भारतीयको हकमा दुई डोज खोप लगाएकालाई मात्रै आउन दिने भनेका छौं ।’ भारतीयलाई केही दिनअघिसम्म ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिए पनि पछिल्लो समय दुई डोज खोप लगाएकालाई पनि आउने दिइएको छ ।
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानसँगै बालबालिकाका लागि आइसोलेसन भवन निर्माणलगायतका काम भइरहेको कोभिड फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकायाले बताए । उनका अनुसार दैनिक १ सय ७४ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण भइसकेको छ । जसमध्ये १ सय ५० सिलिन्डर पाइपलाइनबाट र २४ सिलिन्डिर भरेर राखिनेछ । आईसीयू कक्ष, एचडीयू र आइसोलेसनमा पाइपलाइनबाटै अक्सिजन सप्लाई गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ६ बेडको आईसीयू, १६ बेडको एचडीयू र ५० बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको छ भने बालबालिकाका लागि थप ५० बेडको आइसोलेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट शुक्रबार ८ सय १४ जना स्वदेश फर्किएका थिए । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार एक साताअघि स्थिर देखिएको संक्रमण दर अहिले केही बढेको छ । शुक्रबार ६२ जनाको पीसीआर परीक्षणमा १४ जनामा संक्रमण पाइएको छ । बिहीबार ६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने बुधबार ३ र मंगलबार १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका १२ अस्पतालमा ६९ आईसीयू बेड छन् । तीमध्ये कोभिड संक्रमितका लागि ५४ बेड छुट्याइएको छ । अधिकांश आईसीयू बेड कैलाली र कञ्चनपुरमा छन् ।
निर्देशनालयका अनुसार पहाडी जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा आईसीयू सुविधा छैन । बझाङ र डडेलधुरामा मात्र कोभिड आईसीयू बेड छन् । डडेलधुरामा २६ र बझाङमा २ वटा कोभिड आईसीयू रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्की भएका संरचना सुधार गर्ने र सीमा नाकाबाट हुने आगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । ‘सबै पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा आईसीयू सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिएर पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अब तुरुन्तै उपलब्ध नभएका जिल्लामा पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनमा आउनेछ ।’
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०९:१३
दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वको नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
मंसिर १९, २०७८ कृष्ण खनाल
नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन सकियो, नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन यसै सप्ताहान्तदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । यसैबीच राप्रपाको अधिवेशन चलिरहेको छ । आगामी फागुनमा माओवादी केन्द्रले पनि अधिवेशन गर्दै छ । अर्को वर्ष चुनावको लहर आउनेछ । यी अधिवेशनहरू एकातिर सम्बन्धित दलको वैधताका लागि अनिवार्य थिए भने अर्कातर्फ निकट आइरहेको चुनावलक्षित पनि छन् ।
नेतृत्व चयन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन एवं परिचालन र जनतामा प्रभाव प्रक्षेपणमा अधिवेशनमा दलहरू केन्द्रित हुनु स्वाभाविक र अपेक्षित कुरा हुन् । राजनीतिक सत्ताप्राप्ति दलहरूको प्रमुख अभीष्ट हो, यसमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । तर सत्ता केका लागि भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता चलाउन दलहरूले प्रस्तुत गर्ने विचार, नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमलाई हेरेर जनताले पनि उनीहरूका प्रति धारणा बनाउँछन् । तर यस पटक कांग्रेस र एमालेले खुलेरै भने— उनीहरूको यो अधिवेशनमा नीति र विचारमाथि कुनै छलफल हुँदैन ।
राजनीतिक पार्टी विचारधाराको मञ्च पनि हो । हिजोजस्तो पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद अहिले छन् कि छैनन्, शास्त्रीय बहस गर्न सकिन्छ । हिजोकै सूत्र, हिजोकै मन्त्र असान्दर्भिक भए होलान्, तर अर्थ–राजनीतिक–सामाजिक विचारधाराको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पहिचानका लागि पनि कुनै न कुनै विचारधारा अँगाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको निरन्तर व्याख्या र विमर्श आवश्यक हुन्छ । त्यसका आधारमा नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्, त्यसमाथि पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल हुँदै महाधिवेशनमा आइपुग्दा त्यसले खारिएर केही नीतिगत अभिव्यक्ति पाउँछ ।
अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म नेतृत्वले सोहीअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउँछ । नीति र विचारका हिसाबले कुरा गर्दा पार्टी सञ्चालनको यो सामान्य प्रक्रिया हो । सानो होला, तर पार्टीको विचार र नीति हेरेर आफ्नो अभिमत बनाउने प्रबुद्ध जमात नेपालमा नभएको होइन । अन्यथा सत्ताका लागि मात्र केन्द्रित हुने हो भने पार्टी नै किन चाहियो ? मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी र सेनाका हाकिमहरू जसले शासन चलाए पनि त भयो ।
पार्टी अधिवेशनमा विचार र नीतिमाथि छलफल हुँदैन भनेपछि सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरूमा केही प्रतिक्रिया आए, केही मत पनि व्यक्त भए । प्रदीप गिरिले समाजमा नेतृत्व गर्न विचारको स्पष्टता चाहिन्छ अन्यथा ‘जसको लट्ठी उसकै भैंसी’ उखान चरितार्थ हुन्छ भनेर आफ्नो अभिमत राखे (नयाँ पत्रिका, १४ मंसिर) । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कांग्रेसको रूपान्तरणका लागि दससूत्रीय विचार प्रस्तुत गरे । पार्टी नेतृत्वका लागि आआफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न केही विचार र नीति राख्ने काम कांग्रेस वृत्तमा जारी नै छ । तर यी विचारको कुनै अर्थ नहुने घोषणा कांग्रेसले जारी गरिसकेको छ । हुन त, डेढ दशक नै बितिसक्यो, प्रदीप गिरिले भनेका थिए, ‘कांग्रेसमा विचार पार्टीभित्र होइन, बाहिर छ ।’ तसर्थ अहिले कांग्रेसमा जेजति विचार उठेका छन्, पार्टीबाहिर नै रहन्छन् भनेर मान्नुपर्ने भएको छ ।
अलि फरक प्रसंगमा यो महिनाको प्रारम्भतिर विष्णु सापकोटाको बौद्धिक संस्कृतिमा नेपालका मार्क्सवादीहरूका बारेमा एउटा विचारोत्तेजक लेख आएको थियो (कान्तिपुर, २ मंसिर), त्यसमाथि झलक सुवेदीको मत (नयाँ पत्रिका, ९ मंसिर) पनि निकै गहकिलो थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छापिएका यी लेखहरू पार्टीका विचारशील मानिने पंक्तिले पढे–पढेनन् ? खुबै पढेको भए शीर्षक र लेखकको नामसम्म न हो ! हाम्रो पठन संस्कृति पनि त्यस्तै न छ ! हुन त, अध्ययनशीलता व्यक्तिको प्रवृत्ति हो, पार्टीमा लाग्दैमा त्यो आफैं प्रवाहित हुने होइन । यो वर्गीय विषय पनि होइन; व्यक्ति आफैंले अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्ने कुरा हो । तर पार्टीको गठन र विकासका लागि विचारधाराको अध्ययन–मनन आवश्यक हुन्छ ।
प्रारम्भमै मार्क्सवादी विचार र कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा थोरै केही भन्न मन लागेको छ । मार्क्सको विचार धेरै व्यापक छ, त्यो कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र सीमित छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले कैद गरेको विचारमा त मार्क्सलाई पाउनै सकिन्न, केवल केही नारा र नाम मात्र घोकिन्छ । त्यसमा लेनिन, माओलगायत प्रभावशाली नेताहरूले निर्माण गरेको सत्ताकब्जाको दाउपेच बढी छ; प्रचारबाजी छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले मार्क्सवादी बौद्धिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । पार्टीले त स्वतन्त्र चिन्तकलाई पाखा लगाउँछ, प्रताडना दिन्छ । रूसमा लेनिनकै समयदेखि यसका अनेकौं दृष्टान्त भेटिन्छन् ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्क्सवादी बौद्धिकीको जुन विकास भएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिरबाट भएको छ, अझ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भएको छ । हामीकहाँ नै पनि मार्क्सवादी चिन्तनको घेरा कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिर ठूलो छ । बीपी कोइराला मार्क्सवादी थिए । उनले अँगालेको समाजवाद मार्क्सको विचारभन्दा पृथक् थिएन । समाजवादी बिँडो कायमै राखे पनि प्रदीप गिरिबाहेक मार्क्सवादी हुँ भन्ने मान्छे कांग्रेसमा कोही छजस्तो लाग्दैन । कम्युनिस्ट मात्र मार्क्सवादी हुन्छन् भन्ने गलत भ्रम छ कांग्रेसमा पनि ।
अहिले कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि भएका मार्क्सवादी चिन्तक–लेखकहरू पनि पार्टीबाट आफैं अलग हुन थालेका छन् । मार्क्सवादकै पनि त्यहाँ सही व्याख्या–विवेचना हुन्थ्यो त एउटा ख्याति आर्जन गरिसकेका चिन्तक–लेखकहरू यसरी अलग्गिनुपर्ने थिएन । कम्युनिस्ट पद्धति हुन्थ्यो भने अलग्गिन पनि सम्भव थिएन, जेलमा कोचिनुपर्थ्यो वा निर्वासित हुनुपर्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा खुला समाज भएकाले त्यो सम्भव भएको हो । यसो भन्दैमा मैले यहाँ पार्टीको विचारधारात्मक महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको गठन प्रतिकूल राष्ट्रिय परिस्थितिका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवाह भइरहेका विचार र अभ्यासमा टेकेर भएको थियो ।
विचार, सिद्धान्त र नीतिले अनुप्राणित नगर्ने हो भने राजनीतिक पार्टी केवल सत्ताको भर्‍याङमा सीमित हुन्छ; नितान्त निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ र पार्टी लेनदेनको अखडा बन्छ । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको अधिवेशनमा समर्थकहरूको भीड र तामझाम निकै देखियो, तर भयो के ? आधार दर्जन पदाधिकारीसहित करिब तीन सय केन्द्रीय सदस्यको चुनावभन्दा बढी त केही भएन । केपी ओलीको नेतृत्वकालमा कथित एकता र एमालेको के हालत भयो ? किन एमाले विभाजन भयो ? अध्यक्ष ओलीको एकल व्याख्यामा एमाले आश्रित छ । एउटै पार्टीमा पनि फरक दृष्टिकोण र व्याख्या हुन्छन् । त्यसमाथि स्वस्थ विमर्श हुन्छ । भक्तजनको भीड बढाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु वा पन्छाउनु समाधान होइन ।
यो अधिवेशन केही व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि होइन भन्दै थिए ओली । उनले पञ्चायतकालीन गाउँफर्के शैलीमा पदाधिकारीलगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची घोषणा गरे । महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गर्‍यो । जो उनीसँग असहमत भएर उम्मेदवार बनेका थिए, सबै बढारिए । आफूसँग असहमतलाई पाखा लगाएर पार्टी चलाउने मानसिकता र ओली नेतृत्वमा एमालेको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, म अनुमान गरिरहन चाहन्नँ । तर यसले मुलुकले अपेक्षा गरेको राजनीतिक गति दिन सक्दैन भनी प्रमाणित भइसकेको छ । पार्टी पनि चल्छ कि चल्दैन ? उही असफलता कति पटक दोहोर्‍याउने ?
विचारमाथिको बहसलाई परित्याग गरेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि कति भिन्न होला, अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । हो, अहिले पनि कांग्रेस सबैभन्दा बढी खुलापन भएको पार्टी हो । त्यहाँ एमालेमा जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाले टीको लगाइदिँदैमा सदस्य र पदाधिकारीको चुनावी विजय निश्चित छैन । उनले नचाहँदैमा त्यहाँ विचार र दृष्टिकोण रोकिएको छैन, पार्टी सुधारकै कुरा पनि उठिराखेका छन् । नेतृत्व चयनमा बहस यथास्थिति कि सुधारसहितको विकल्प भन्ने छ । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विश्वप्रकाश, गगनहरूले कुनै न कुनै रूपमा आआफ्ना दृष्टिकोणसहित विचार प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि जब शीर्ष नेतृत्व नै विचारमन्दीको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो अवस्थामा पार्टीले विचारको स्पन्दन दिन सक्तैन । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तै रह्यो ।
काकताली परेर सत्तामा पुग्नुलाई पार्टीको उपलब्धि मान्न सकिन्न । पार्टीको महाधिवेशन नै विचार, दृष्टिकोण र नीतिगत विमर्शको अन्तिम थलो हो भन्ने पनि होइन । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । बीपी कोइरालापछि नेपाली कांग्रेसमा विचारको प्रवाह छैन भने हुन्छ; अहिले त्यहाँ विचारको जेजति कुरा छ, त्यो बीपीले अघि सारेका विचारकै निरन्तरता हो । तर विगत दुई दशकमा बीपीको समयमा कल्पना नगरिएको व्यापक राजनीतिक उथलपुथल भयो । २०६२–६३ सालमा भएको आन्दोलन विश्वकै ठूला आन्दोलनमा गणनायोग्य थियो । राजतन्त्र फालियो; मुलुकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत धेरै नयाँ राजनीतिक प्रयोग र अभ्यास थालेको छ । लोकतन्त्रका केही परम्परागत अडानबाहेक यसमा कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा कुनै विचार प्रवाह गर्न सकेको थिएन । सूचना प्रविधिले दलहरूलाई उछिनेको छ ।
संवैधानिक प्रणालीको अभ्यासका क्रममा कैयौं गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, कतिपय सैद्धान्तिक पनि छन् । संसद् कमजोर भएको छ, संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू न्यायपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । हरेक मुद्दामा नागरिकहरू आफैं सडकमा उत्रिनुपरेको छ । प्रधान न्यायाधीश वा अर्को कुनै न्यायाधीशको आचरणको कुरा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संरचना खास गरी न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । तर कांग्रेस मुकदर्शक भएर बसेको छ । विचार छैन भने एजेन्डा हुने कुरा पनि भएन । पचहत्तर वर्ष लामो इतिहासमा नेपाली कांग्रेस वैचारिक रूपले यति विधि दरिद्र कहिल्यै थिएन । यो अधिवेशनले फेरि पनि यस्तै विचारशून्य नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहन्छजस्तो लाग्दैन ।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै दल लोकतन्त्रको फराकिलो दायराभित्र आइसकेकाले वैचारिक द्वन्द्व र संकट नभएकाले राजनीतिमा वैचारिक विमर्श अलि ओझेल परेको पनि हुन सक्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले भनेजस्तो यो इतिहास वा विचारको अन्त्य पनि होइन, आयाम बदलिएको मात्र हो । अर्को कुरा, खुला र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पार्टी सत्ताको भर्‍याङ नै हो, पार्टीबाहेक अर्को माध्यम उपलब्ध छैन । तर त्यो भर्‍याङसम्म पहुँच र त्यसको प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्‍यो । चुनाव हुनु मात्रै प्रतिस्पर्धा होइन । संविधानले पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ । तर त्यो प्रावधान पाँच वर्षमा एक पटक अधिवेशनको औपचारिकता पूरा गर्नेमा सीमित भएको छ ।
हाम्रा दलहरूको संरचना र नेतृत्व अभ्यास पटक्कै प्रतिस्पर्धी छैन । प्रतिस्पर्धा भनेको पार्टीको अधिवेशनमा हुने चुनावमा कुनै आकांक्षीको व्यक्तिगत हारजितको मात्र कुरा होइन । नेतृत्वसँगै नीति र दृष्टिकोण पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, आवधिक चुनावमा त्यो नीति र दृष्टिकोणप्रति लोकप्रिय समर्थन पनि अपेक्षित हुन्छ । लोकप्रिय समर्थन जुटाउन नसक्ने नेता हट्नुपर्छ, फेरि आउने प्रयत्न पनि गर्नु हुँदैन । नेतृत्वका लागि समयसापेक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ्य खेलनियमको अभाव छ । पार्टीहरू चरम आन्तरिक विग्रहमा छन् । पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार व्यापक हुन थालेको छ । सरकारी पद र प्रभावको पार्टी अधिवेशनमा दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिन्छ । नेता भनेका सबैभन्दा ठूलो सामन्त र ठेकदार हुन्जस्तो लाग्छ । लेनदेन र भागबन्डा नमिलेपछि यो पार्टी किन चाहियो भन्ने मानसिकता छ । यसरी कति दिन चल्छन् पार्टीहरू ? पार्टीहरू आफैं संकटग्रस्त छन्, संकटग्रस्त पार्टीहरूले कसरी सुशासन दिन सक्छन् ?
नेता भनिएकाहरू जनताका नजरमा असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । यो एक जनाको कुरा होइन, देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि कमल थापासम्म सबैमा यो लागू हुन्छ । लोकतन्त्र मात्र होइन, आजको राजनीति नै दलहरूको अभावमा चल्न सक्तैन । दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वका नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो कुरामा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । पार्टी सञ्चालनको आन्तरिक पद्धतिमै सबैभन्दा पहिले बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सर्वस्वीकार्य खेलनियमको स्थापना, मर्यादा र पालना नै यसको निकास हुन सक्छ ।